हेलचेक्र्याइँले गयो गोक्यो हिमतालमा ३ विद्यार्थीको ज्यान – Sagarmatha Online News Portal
प्रधानाध्यापकको अनुमति विनै विद्यार्थी र शिक्षक भ्रमणमा गएका रहेछन् : अध्यक्ष शेर्पा
सोलुखुम्बु । शेर्पा समुदायले मनाउँदै आएको फाङ्गी पर्वको ३ दिने विदामा खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत कक्षा ९ का विद्यार्थीहरु गोक्यो क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका थिए । खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाले फाङ्गी पर्वमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । विदाको सदुपयोग पनि हुने र विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गोक्यो हिमताल पनि हेर्न पाइने तीब्र इच्छाका साथ विद्यार्थी र शिक्षकले सो क्षेत्रको भ्रमण तय गरेका हुन् ।
रेञ्जोला पासबाट कैद गरिएकाे गोक्यो हिमतालको फोटो । जहाँ पौडीखेल्ने क्रममा ३ विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो हिमताल गोक्यो हिमताल हो । यो ताललाई स्थानीय शेर्पा भाषामा थोनाक भनिन्छ । पछिल्लो समय यो हिमताललाई गोक्यो तेस्रो ताल (थर्डलेक) पनि भन्ने गरिन्छ । यो हिमताल समुन्द्र सतहबाट ४ हजार ७ सय ९० मिटरको उचाईमा (१५ हजार ४ सय फिट) रहेको छ । यो ताल विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पाईने ताजा पानीको तालहरुमध्ये एक हो ।
सन् २००७ देखि गोक्यो ताल रहेको ७ हजार ७ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । यस क्षेत्रको सूची नं. १६९२ रहेको छ । सगरमाथा आधारशिविरपछि सबैभन्दा बढी पर्यटक यस क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । यो तालको क्षेत्रफल १९६.२ हेक्टरमा फैलिएको छ । यसको गहिराई ६२.४ मिटर छ । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने बेलामा यसको नापजाँच गरिएको थियो ।
यसरी गयो अकालमै विद्यार्थीको ज्यान
गोक्यो हिमताल रहेको क्षेत्रमा बाह्रै महिना हिउँ पर्छ । यस क्षेत्रको तापक्रम प्रायः माईनसमै झरेको हुन्छ । अहिलेको समयमा पनि यस क्षेको तापक्रम ६/७ डिग्रीभन्दा कहिल्यै माथी जाँदैन । चिसो हावा चल्छ । अत्याधिक चिसोका कारण यस क्षेत्रमा शरीरका अंगहरुले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् ।
यस्तो प्रतिकुल वातावरण भएको हिमतालमा पौडी खेल्नु भनेको मृत्युलाई अगाल्नु सरह हो । र त्यही भयो खुम्जुङ माविमा अध्यनरत ३ विद्यार्थीको लागि । किशोरावस्थामा जो कोही पनि स्वतः चञ्चले स्वभावका हुन्छन् । आफ्ना अभिभावकोभन्दा साथीहरुको कुरा बढि विश्वास गर्ने स्वभाव हुन्छ किशोरकिशोरीहरुमा । यस्तो उमेर समूहका किशोरकिशोरीहरुमा बढि जिद्दीपना हुन्छ । त्यसैको परिणाम भोगेका छन्, खुम्जुङ माविका ३ जना विद्यार्थीहरुले ।
भ्रमणमा गएका शिक्षकहरुले विद्यार्थीको रुपमा मात्र होइन अभिभावको जिम्मेवारी पनि लिएर गएका थिए । तर ती शिक्षकहरुले अभिभावको दायित्व पूरा गर्न नसक्दा विद्यार्थीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यही क्षेत्रमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई त्यस क्षेत्रको वातावरण कस्तो छ भनेर राम्ररी थाहा छ । सो क्षेत्रमा बाहिर निस्कन त के ? हिमतालमा पौडीखेल्नु त परकै कुरो हो ? यदि शिक्षकले कठ्याङ्ग्रीने वातावरणमा पौडीखेल्न नदिएको भए । ती विद्यार्थीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।
बचाँउने प्रशस्त सम्भावना भएपनि प्रयास भएन
विद्यार्थी पौडी खेलिरहेकै अवस्थामा उभिन खोज्दा खोज्दै हिमतालको अझ गहिराईमा धकेलिएको दृष्य भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनलाई त्यो गहिराईबाट बाहिर ल्याउने प्रशस्त सम्भावनाहरु पनि थिए, तर ती सम्भावनाहरु अपनाइएन । उनलाई बचाउँन गएका अरु दुई जना विद्यार्थी पनि उनीसँगै हराए । उक्त दुर्घटनाको एक मिनेट २९ सेकेण्डको भिडियोमा कुनै शिक्षक तथा स्थानीय उद्दारको लागि गएका छैनन् । त्यही वरिपरिवा केहि विद्यार्थीहरु यताउता अत्तालिदै दौडिएका छन् । ती विद्यार्थीहरुले तत्कालिक अवस्थामा गरेका प्रयास भने असफल भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
पौडीखेल्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई उक्साएका एक वयस्क व्यक्तिले नेपथ्यबाट विद्यार्थीलाई चिसो पानीमा पौडी खेल्न हौस्याएका छन् । चार पटकसम्म पौडीखेल्न हौस्याएका ती व्यक्तिले विद्यार्थी डुब्दा तत्कालिन समयमा बचाउने प्रयास समेत गरेनन् । सायद उनले समयमै केहि प्रयास गरेको भए यस्तो भयानक दुर्घटना हुँदैनथ्यो की ?
नेपथ्यबाट आएको आवाजपछि विद्यार्थीले पौडी खेल्न हाम फालेका छन् । उनी उभिने कोशीस गर्दागर्दै हिमतालको गहिराईतिर हुत्तिएका थिए । उनी गहिराईमा डुबेपछि नेपथ्यमा धेरै खैलाबैला र चिच्याहाट फैलिएको थियो । कसैले डोरी डोरी भन्दै कराएका थिए भने कोही हिमतालमा हामफालेर तान्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरुको प्रयास असफल भयो । अन्ततः चीसो पानीसँगै ती ३ विद्यार्थी पनि गहिराईमै डुबे ।
खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले प्रधानाध्यापक र कतिपय अभिभावकको अनुमति विनानै विद्यार्थी र शिक्षक गोक्यो क्षेत्रको भ्रमणमा गएको बताएका छन् । गोक्यो हिमतालमा विद्यार्थी बेपत्ता भएको ३ दिनपछि पनि उनीहरुको अवस्था अज्ञात भएपछि शसस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली पठाउने पहल गरिरहेकै बेला उनले यस्तो बताएका हुन् ।
दुर्घटना भए लगत्तै नाम्चे ईलाका प्रहरी कार्यालय र नाम्चेस्थित नेपाली सेनाको गुल्मबाट केहि सुरक्षाकर्मी सो क्षेत्रमा पठाइएको समेत अध्यक्ष शेर्पाले बताए । अहिले शसस्त्र प्रहरीको ५ जनाको गोताखोर टोली गोक्यो हिमतालमा पुगेको छ । हेलिकोप्टरबाट गएका गोताखोर टोलीलाई खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाबाट हेलिकोप्टर चाटर गरिएको समेत अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।
खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका जनप्रतिनिधीको रुपमा वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी दुर्घटना स्थलमा पुगेका छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा कुनै सञ्चार सेटले काम नगर्ने भएकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।